Mujaahid Eid ali Axmed oo khudbad qiimo leh ka jeediyey Cardiff
Home WARARKA Mujaahid Eid ali Axmed oo khudbad qiimo leh ka jeediyey Cardiff
Cardiff(Berberanews)-Waa khudbad qiimo leh oo uu Professor Eid Ali Salan ka jeediyay xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay taas oo lagu taageerayo isbedelka siyaasadeed ee waddanka ka dhacay oo lagu qabtay Magalada Cardiff ee Boqortoyada Ingiriiska markii taarikhdu aheyd 26th November 2017.Waxaa professorku hambayo gaar ah u diray madaxweynaha cusub ee la doortay Mudane Muse Biixi iyo ku xigeenkiisa Mudane Cabdiraman Cabdillahi Saylici. Sidoo kale, waxaa Mr Eid guud ahaan u hambalyeeyey xisbiyadda mucaaradka ah iyo dadweynaha codeynayey isagoo si gaar ah carabka ugu adkeeyay muuhimadda ay leedahay bisaylkii ay muujiyeen iyo dadaalkii lexajecladu ku dheehnayd ee ay u ilaashadeen wadajirka wadankooda iyo hirgalintii in wadanka si nabadda loogu tartamo markii dambena la isku hambalyeeyey natiijadii doorashada.
Hadaba, MR Eid Ali Ahmed oo madasha hadlayay waxa uu hadalkiisa ku bilaabay sida tan;
caawa waa habeen khayrle, habeen aad iyo aad loogu farxo, anigana dareenkayga si xoog leh u soo jiitay, ujeedada isku imaatinkeenan ayaa ah inaynu ka hadalno doorashadii milgaha iyo maamuuska lahayd ee dalkeena ka dhacday oo wax aad iyo aad loogu farxo ah, guud ahaan caalamkana soo jiidatay, sidoo kalena ah talaabo horumar leh oo hore loo qaaday, wax weyna ina tari doonta umad ahaan.
Anigu dhawaan baan ka imi dalkii waxaan halkan joogaa (Cardiff) laba wiig, Waxaanan si dhow ula socday hawlihii ololaha iyo dhamaan wixii hawl dalka gudahihiisa (Somaliland) ka socotay labadaba.
Horta xaqiiqada dhabtaa marka laga hadlo, siday wax u socdeen intii lagu gudo jiray waqtigii kaambaynka iyo xaaladii dalku galay, aduunyada kale iyo gudaha dalkaba waxa la filayay inay dhibaato iyo fad-qalalo siyaasadeed waddanka ka dhacaan, yacnii xaqiiqada dhabta ah, laakiinse ilaahay kama dhigin waxay noqotay inay nabad galyo iyo wanaag inoogu dhacday doorashadii waana wax Ilaahay loogu mahadiyo, umadda reer somaliland waxay muujiyeen bisayl siyaadeed iyo laxejeclo ay dalkooda ka qabaan iyo inay wax walba ka horumarinayaan ilaalinta nabadgalyada iyo adkaynta wadajirkooda.
ololihii iyo Dorashadii dalkaa ka dhacday waa wax ay maanta caalamkoo dhami og yihiin,
Intaan Hargeysa joogay waxaan la kulmay ninkii watay qolooyinkii koob joogayaasha caalamiga (Obervers) ahaa Mudane Michael Wallas waa nin wax ka dhiga jaamacad ku taala London, waa nin aan aad u aqaano wakhti badana inala soo shaqeeyay, waxay eegayeen
kooxda uu madaxda u ahaa inay wax badan oo khaladi dhacaan, Imika waad ogtihiin waxa uu soo saaray warbixin cajiiba oo uu aad ugu amaanay sida habsamidda leh ee hawlihii codbixinta doorashadu u dhaceen.
Maanta Somaliland mucaarid, muxaafid iyo xataa dadka codkooda dhiibanayay amaan weyn ayay kasbadeen sida dadkaasi u foodeen ooy codkooda u dhibteen waa cajiib waana talaabo ku dayasho mudan.
Waxyaalaha aynu ku aragnay ee cajaa’ibka waxaa ka mida, Qof wayn oo laga yaabo inaanu kici karayn oo kursi sita oo kolba la siqaya ilaa uu ka gaadhayo meeshii laga codaynayay dabadeed uu sidaa ku codeeyo, Aduunyada meelna laguma arag taasina waa mid Ilaahay loogu mahad celiyo waana qisooyinka aynu leenahay.
Berigii SNM tii Etheopian ku waxay keeni jireen Askar badan markay SNM tu shirayso baqdin dhexdooda ah waayo waxay moodi jireen hadalka aynu isleenahay inaynu is dilayno, Marka dambe uun bay arkaan raggii wada qaylinayay oo hadana wada socda, Taasina waa wax Ilaahay ina siiyay inaguna manaystay sidaa inaynu nahay oo u kala danbayno.
Runtii aad iyo aad baan u Hanbalyaynayaa dadka reer Somaliland siday u codeeyeen mucaarid iyo muxaafidba.
Ta labaad maanta madaxweynaha la doortay waxa laga yabaa inaan aqoon dheeraada u leeyahay waayo, Isku da’ baanu nahay, wax badana waanu soo wada marnay, SNM baanu soo wada marnay, anagoo yaryar banu isnaqaney, Sidaa daraadeed waa nin aan aqoon durugsan isku leenahay. Gadaal baanan kaga hadli donaa tariikhdiisa qodobo cajiiba oo wakhtigii halganka ah oo uu gaar u lahaa qaarna ka wadashaqaynay.
Hadaba, maanta dalkeenu wuxuu haystaa nabadgalyo waana waxa ugu wayn ee Ilaahay umad siiyo.
Anigu horta maan qayli jirin Ilaahay baa igu og casarkii markay tahay baan suuqa yara mar mari jiray farxad daraadeed mar mar baan iska qosli jiray, Siday dadku nabadgalyada u haystaan ee ay iskaga Adeeganayaan, Mobiladoodana u sitan ee ay u faraxsan yihiin waa nimco ilaahay, Waa laga yabaa xaga Faqriga inay cidhiidhi nolosha ka dhigto oo dalkeenu waa sabool 70%-80% maantana waxay ku noolyihiin nolol aad u adag.
Aniga iyo Saddex khubaro oo wax ka dhiga Cardiff University waxaanu ka samaynay cilmi baadhis waxaananu ogaanay 70% -80% dadkeenu inuu maanta ku noolyahay waxa la yidhaa Informal Economy, waa islaanta yaree Xabxabka iibinaysa, islaanta Tamaandhada iibinaysa, caanalayda iyo qaarkale oo badan oo ah dadka quutal daruurigooda dirqiga ku hela.
Afartan ama Tobankan taajir ha u qaadanina inu dalkeenu hodan yahay ee dalkeenu waa sabool, Markaa horta maanta waa inaynu taa wax ka qabanaa oo dawlada cusubi wax ka qabataa waa mid loo baahan yahay waana muhiimada ugu weyn waayo dhibaatada waxa keenayaa waa fakhriga.
Waxaan idiin sheegayaa maanta inay jiraan dadbadan oo aqoonle iyo wayoarignimo leh oo arintaa wax ka qaban karaa.
Anigu imika Saddexbiloodba waxaan la shaqaynayay markaan dalkii joogay Central Bank oo aanu u wadnay Tobabaro iyo Qorshi Banka.
Somaliland hadaanay yeelan Central Bank adag wadan hore umare noqonmayo, Central Bank ayuunbaa wadan dhaqaalihiisa wax ka qaban kara, Imika waxaanu soo dhamaynay shanta sano ee soo socota (2008 -2022) qorshuhuu baankaasi ku shaqayn lahaa ee uu dalka ku horu marini lahaa, Alxamdulilaa saaka ayaana la hor dhigay madaxweynaha cusub, Markaa taasi waxay siinaysaa dariiq cad nimanka halkaa joogana ee baanka ka shaqeeya aad iyo aad baan u hanbalyaynayaa.
Saylac, Ceerigaabo iyo Ilaa Lascanood wixii maamulayaal ahaa meeshay isagu yimadeen, dhalinyaro oo aqonyahane iyo dad waaweyn oo khibrad leh way leeyihiin. Maanta qorshahoodii way hor dhigeen madaxweynaha siday uga baxayaan ee dalkan Central Bank tayo leh u yeelani lahaa wadankuna hadaanu Central Bank yeelan dee waxaynu noqonaynaa uun Xawaalado ma noqonayno wax hore u soconaya. Bananka maante jira xawaalado uun bay noqonayaan ee ma noqonayaan banan tam ah oo awadleh, Lakiin markuu Central Bank awad lihi samaysmo iyaguna waxay noqonayaan Commercial Banks awad tame leh
Aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa madaxweynuhu inuu arinkaa la hirgaliya oo uu qoladaa bank la shaqeeyo waa niman aan aad ula soo shaqeeyay una helan inan dhisa Central Bank awad leh.
Anigu waa talooyinka aan siinayo Madaxweynha een leeyahay qorshahaasi waa inuu sidiisa u socdaa Insha Allaah.
Qodobka kale een ka hadli lahaa waxa weeyi dadkeenu maanta doorashadaa ay galeen way ku kala fogaadeen waxa samaysmay laba xisbi oo xooga laakiin waxyaale badan sidii hore looga hadlay oy Qabyaaladu ku jirto oo dhibaatooyin kale ku dhex jiraan ayaa yaala, madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa waxaanu Ilaahay uga baryaynaa siday dadkaa u midayn lahaayeen una walaalayn lahaayeen Ilaahay inuu waafajiyo.
Ta kale waxa weyaan musuqmaasuqa oo Madaxweynaha Madane Muse Biixi Cabdi hadlay. Musuqmaasuqu wa cudur weeyaan xaqiiqada dhabta ah markaad eegto musuqa maanta halkuu inaga gaadhay waa waxaan la qiyaasi karin waa cudur cad oo meesha yaala. In lala dagaalamo musuqmaasuqa ha ahaato xaga ugu saraysa ama xaga ugu hoosaysa arinkuna wuxuu ka bilaabmayaa ninka midida daabkeeda haya waa inaad tusaale ahaan dadka ku wadaa (Lead by Example) waan ku boorinaya Madaxweynhu inu si adeg ula dagaalamo musuqmaasuqa xedhiga goostey.
Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisu waa inay dawlad tayole keenaan, wadankeena Ilaahay baa nimco ina siiyay, Tusaale hadaan u soo qaato Roobka sanadkii shan bilood buu da’aa, shantaa bilood hadaan laga faa’idaysan oon roobkaa la qabsan dee meel ma gaadhayno markaa anuu waxaan odhan lahaa cidii uu madaxweynaha cusubi dooranayo waa inuu aqoon iyo khibrad ku dortaa waanay joogaan waanay buuxaan dad aqoon iyo khibrad ba lihi.
Maanta hadii dad tayo le oo cilmi le hadii somaliland loo dhiibi waayo dee waxa weeyi waynu isku meeraysani uun bari shanta danbe uun baynu hadana isku imani donaa
Laakiin maanta hadii ay noqoto in aqoontii lagu shaqeeyo waxaan filayaa Ilaahay nimcadaa uu ina siiyay inaynu ka midho dhalin karno, inaynu dadkeena saboolka ah, islantaa xabxabka iibinaysa ama caanaha iibinaysa ee lixda caruura ee midi jaamacada ugu jiro leh inla taageero ayaynu u baahanahay.
Anoo soo gaabinaya waxa weeyi Madaxweyne Muuse noqotay sidaan idiin sheegay horta aniga iyo Muuse isku da baanu nahay isku wakhti baananu ahayn wuu nasiib badan yahay sababtaan idiin sheegayaa, Dagaalkii aynu galnay ee Buuraha 1984 waxa inagaga dhintay dad fara badan, Baabuur maynu hayn waxba maynu hayn. Markii laga soo baxay ee dagaalkaasi dhamaaday waxa weyaan moraalkeenu dhulkuu yaalay, Muuse wuxuu nagu soo maray Jabuuti 1985 horaantisii ayaanu ka dirnay Jabuuti, waxa kale oo warqad noo soo qoray Alle Ha U NaxaristeeAdanShiine o aha Wasiiru Difaaca uu ku leeyahay hadaydaan baabuur soo dirin waanu ka baxaynaa anana, Horta waxaa Ilaahay mahadiiya oo noo hir gashay inaanu Jabuuti ka dirno 17 baabuur o waaweyn Muusana wuxu ku biirey SNM.
Xasan Ciise oo dhawan ka hadlay waxaanu yidhi wakhtigii SNM Muuse waxyaalo badan buu badalay, xaqiiqada dhabta iyadoo mooraalku dhulka yaalo Dagaalkii Buraha 1984 debede waxay noqotay Muuse inuu qayb wayn ka qaato isbedal iyo dar dar hore leh dagalkii SNM kula jirtay Faqashtii .
Maanta waxaan leeyahay in kastoo moraalku wanaagsan yahay hadana ama dhaqaale xumo ha ahaato ama kala qaybsanaan ha ahaato amba qabyaalad xedhiga gooste ha ahaato wakhti yar adag baynu ku jirnaa waxaan leeyahay Muusow ka faa’idayso fursadan dahabiga ah sidaad tii horeba ee 1985 uga faa’idaysatay oo Dadka sin oo cadaalada sin oo labadii wiil ee kala xariifsanaa ee kii laga xariifsanaa gacanta la qabanayo kii xariifka ahaana waxba waayayo baabi’i oo jooji taasiba waa korobshane.
MR Eid Ali Ahmed
Mujaahid Eid ali Axmed
Professor Eid Ali Salan
Previous article“Ma Jiraan Wasiirro inay Madaarka Ka Dhoofaan loo diiday.” Afhayeenka Madaxtooyada Somaliland
Next articleGuddoomiyaha Ururka SOLJA oo ka hadlay Suxufiyiin ku xidhan Gobollada Qaarkood